HomeTURKEYGobolka Central Anatolia06 AnkaraQeybaha Turkiga ee Ay Leedahay Ajaanibta
09 / 10 / 2019 Levent Elmastaş 06 Ankara, Gobolka Central Anatolia, GUUD, Xayeys, TURKEY 0
magacyada turkish ee ay leeyihiin shisheeyaha
OUR OIL: Yıldız Holding wuxuu summaddeena ka iibiyay Ajinomoto Jabbaan ah 2016.
COLA TURKA: 2015 waxaa iibiyay Ülker Jabbaan Dydo DRINCO.
MILK: Waxaa cabay kooxda Faransiiska ee 'Lactalis'.
SANA OIL: Waxaa laga iibiyay Unilever, oo ah shuraako Ingriis-Nederland ah.
ÇAMLICA GAZOZ: 2015 waxaa laga iibiyay shirkadda Japan ee Dydo DRINCO.
DAMLA SU: Waxay hadda sumad u tahay Coca Cola.
Biyaha Roobka: Nestlé waxay heshay 2006.
ESKIPAZAR: 2015 waxaa laga iibiyay shirkadda Japan Dydo DRINCO.
KOMILI OLIVE OIL: 2017 waxaa laga iibiyay Koninklijke Bunge BV oo fadhigiisu yahay Mareykanka.
SAKA SU: 2015 waxaa iibiyay Ülker Jabbaan Dydo DRINCO.
BIYAHA SIRMA: 2013 waxaa qaatay shirkada Faransiiska ee Danone.
YRSAN: 2013, Dubaili wuxuu noqday Abraaj Group.
YUMOŞ: Wuxuu noqday sumcadda Unilever ee ku taal UK iyo Nederland.
HAYAT SU: Faransiiska ayaa ku biiray Danone.
AKMINA: Waxaa loo iibiyay shirkadda Faransiiska ee Danone.
YEDİGÜN: Waa astaan ​​ay iska leedahay shirkad Mareykan ah Pepsi Co.
XIRIIRKA MAGAALADA: Shirkadda British Cadburry waxay ahayd.
CUNTADA FİLİZ: 2003 waxaa laga iibiyay Talyaani Talyaani ah.
NUHUN ANKARA Baastada: Waxay noqotay shuraako la shaqeysa shirkadda Japanese Nisshin Foods iyo Marubeni Corporation ee 2014.
CIIDAMADA GOLF ICE CARAM: Waxaa loo gudbiyay shirkadda Nederland.
UNO: Kala badh UNO waa Iswidish Vedanta Sinaanta.
MAGAC: 2014 waxay iskaashi la yeelatay Bahrain Investcorp.
BANVIT CHICKEN: Waxaa iibsaday Hay'adda Maalgashiga ee loo yaqaan "BRF" iyo Hay'ada Maalgashiga ee Qatar ee 2017.
Heerka CP: Waxaa iibsaday koox fadhigeedu yahay Thailand.
CUNTADA OLTAN: Waxaa iibsaday Talyaani Ferrero.
KEMAL KÜKRER: 2013 wuxuu ku guuleystay Ajinomoto Jabaan.
KITCHEN: Waxaa ku biirey shirkada Ajinomoto ee reer Japan.
SWALLOW, SEZAİ ÖMER MADRA saliida saytuunka: Waxay ahayd Mareykanka.
FALIM SAKIZ: Waxaa laga iibiyay shirkadda British Cadburry.
Nuts PEYMAN: Shirkadda Bridgepoint ayaa iibsatay.
Jelly Confectionery: Waxay iska leedahay shirkadda Ingiriiska ee Cadburry.
Helitaanka BASKET: Shirkadda, oo uu aasaasay Nevzat Aydın, waxaa laga iibiyay Halyeeyga Bixinta Jarmalka.
IPEK SHAMPOO: Waxay iska leedahay shirkadda Faransiiska L'Oréal.
HACI ŞAKİR: Nooca caanka ah shirkadda American Colgate.
ACE: Procter & Gamble ku saleysan Mareykanka.
KALI WAA: Waxay iska leedahay shirkadda reer Ontex.
MADO: Kala badh dadkaasi waxay ahaayeen reer Qatar.
BEYMEN: Waxaad leedahay dadka Qatar.
OF TEA: Jacops ayaa helay.
Gitti tegey: eBay wuxuu ka iibiyay GittiGidiyor shirkadda Mareykanka ee 2011.
TURKCELL: Wada shaqeynta ugu weyn ee Turkcell waa Ruushka Altimo iyo Iswidishka TeliaSonera.
Bankiga TEB: Waxaa iibsaday hay'adda baanka Faransiiska ee 'BNP Paris' ee 2005.
PROFILO: Qalabka Guryaha ee Bosch iyo Siemens tan iyo 1995.
ATASUN OPTİK: asal ahaan Dutch, wuxuu ku biiray dukaamada silsilada shisheeye.
VIKO: Jabbaanku waxay iibsadeen Panasonic.
BAYMAK Kombi / Geyser: Dutch BDR wuxuu ahaa Thermea.
SEBA MED: sumadda Jarmalka.
ERKUNT TRACTOR / Ankara iyo HİSARLAR MAKİNE / Eskişehir: Waxay noqotay shirkada Indian Mahindra.
MNG CARGO: Dubaili MIRAGE CARGO waxaa laga iibiyay B.V.
DILMARASHADA TALMADA TEKİN ACAR Faransiis Sephora Cosmetics Inc. Waxay heshay.
XAFIISKA OIL: Waxaa loo iibiyay shirkad Dutch ah.
BOLIISKA: Kansai Paint Co. Jaban. Ltd.
KOOBKA DHAQANKA: Waxaa soo iibsaday Jabbaan.
Filli Boya, Ulusoy Electric, Kamil Koç, iwm., Qaar badan oo ka mid ah sumcadaha wadankeenna iyo qaran ahaanba waxay u gudbeen gacanta shisheeyaha.
Ciidda annagaa leh, beerta annagaa leh, biyuhu annagaa leh, hilibku annagaa leh, caanuhu waa annaga, saliiddu annagaa leh, saliiddu annagaa leh, shaqaalaha iyo shaqaalaha ayaa leh annaga, laakiin ragga ayaa dalkayaga soo gala, badeecada noo qabta, orod noo gala, badeecada soo qaad, qiimaha dib u celi oo haddana dib noo iibiya. . "
Noocyada Macmiilka ah ee la soo doorto ee ugu dambeeyay tiknoolajiyada wax soo saarka xamuulka 25 / 05 / 2018 In la soo saaro baabuurta xamuulka iyo qaybaha, Solentek waxay qorsheyneysaa in ay soo saarto qaybta tareenada adduunka iyo in ay sameyso geeddi-socodka alxanka si aad u sarreeya oo sarreeya adiga oo isticmaalaya robot. Iyadoo adeegsanaysa robots, kharashka geeddi-socodka soo socda ayaa u dulqaadan doona, "ayuu yiri Muammer Abali, oo ah agaasimaha shirkadda. Solentek wuxuu ka shaqeynayaa Nilufer Organized Industrial Zone oo ku taal Bursa, oo ku yaal aagga 9 bin 200 aagga wax soo saarka labajibbaaranaha iyadoo la isticmaalayo kaabayaasha farsamada iyo nidaamka tareenka iyo beeraha birta. Shirkadda ayaa muhiimad gaar ah u leh daraasadaha R & D ee nidaamka tareenka, kuwaas oo ah kuwa ugu maqan dalkeenna. Shaqaale farsamo oo firfircoon oo tijaabo Deney
Tüdemsaş wuxuu leeyahay meel muhiim ah oo ka mid ah warshadaha Turkiga 08 / 10 / 2012 Selim Dursun, oo loo magacaabay Talabixiye Wasaaradda Gaadiidka, Arrimaha Badaha iyo Isgaadhsiinta ee Tudeysas General Manager, wuxuu bilaabay xilkiisa inuu noqdo Maamulaha Guud iyo Guddoomiyaha TUDEMSA ee 10 / 05 / 2011. / 02 taariikhda iyo 10 / 2012 oo go'aanka Wasaaradda Gaadiidka, Arrimaha Badaha iyo Isgaadhsiinta ayaa loo magacaabay Amar Wasaaradda. Taariikhda sanadlaha ah ee 28429 oo uu leeyahay meel muhiim ah oo ku taal Warshad Turki ah, aad ayaan ugu faraxsanahay inaan ka shaqeeyo ururkan quruxda badan. By kordhinta nidaamka iyo waxqabadka shaqo ee heli karaa shirkad noo inta lagu jiro muddaddayda aan la shaqeyno dhammaan shaqaalaheena xitaa more ...
Erciyes Waxay Noqoneysaa Goob Ganacsi ah 03 / 04 / 2015 Erciyes Waxay Noqon Kartaa Meelo: Shirkadda caanka ah ee qalabka lagu ciyaaro ee Australiya (HEAD) waxay dooratay Erciyes xilli xiga 2015-16 saldhigga wax soo saarka xilliga qaboobaha. Erciyes Xarunta Cimilada iyo Isboortiga ee Jiilaalka, oo noqotay mid ka mid ah cinwaanada ugu muhiimsan ee isboortiga jiilalka maalgashadeeda iyo qaabka maareynta xayawaanka ee ay hirgalisay Dawladda Hoose ee Kayseri, ayaa bilaabay inay ka soo qaadato xarumaha lagu magacaabo barafka aduunka ee caalamka iyadoo ay ugu wacan tahay tartamada caalamiga ah. Noocyada dunidu caan ku yihiin oo aan wali ku dhicin kororka tani waxay hadda u soo saartaa alaabteeda adduunyada Erciyes. Shirkadda qalabka korontada ee ugu caansan dunida ee aasaasiga ah, oo aasaasay Austria, 1950, ayaa sidoo kale ku dhawaaqday 2015-2016 alaabooyinka xilli ciyaareedka.
MADAXWEYNE RECEP ALTEPE: Gaadiidka deegaanka ayaa sheegay in 'IpekBöceği' ay tayadiisu ka fiican tahay sumadaha tafaftirka adduunka 06 / 07 / 2012 taraamka 'taraamka iyo jiriqsiga iyo Silk ee dunida-caan, oo tilmaamaysa in tayo sare leh ka badan brand Bursa Duqa Recep Altepe,' Turkey ugu horeysay ee degaanka Waxaan samayn karaa shaqo this 2,5 sano. Waxaan samaynaa taraamyo, qaar ka mid ahna waxay ku hadlaan jiirarka. Dalka Swiiserland ayaa taraamka kor u kacaya. Waxaan halkan joogi doonaa? saarka Bursa Hotel Hilton Duqa Metropolitan Recep Altepe wada socda, dunida ma aha in tartanka ee magaalada, ayuu sheegay in uu jiro waqti for Turkey si waqtiga ka dhumin. Waxa uu hoosta ka xariiqay baahida loo qabo Bursa in ay abuurto badeecooyin cusub iyo noocyo cusub, Altepe wuxuu yiri, "Waxaan u baahannahay inaan horumarinno injineerkayaga oo aan horumar ka sameyno. Dadka dhalinyarada ah ee dhalinyarada ah
Alishan Logistics waxay la kulantay caalamka aduunka ee Logitans Transport Logistics Fair 20 / 11 / 2012 Iibsashada Gaadiidka Gaadiidka Gaadiidka Soodhaweynta waxay la kulmeen magaca caalamiga ah ee Logitans Transport Logistics Fair, oo isku keena shirkadaha suuqyada Turkiga oo ku tartamaya suuqyada caalamiga ah ee caalamka; 15 - 17 waxaa lagu qabtey Xarunta Istaraatiijiyada ee Istanbul iyadoo ka qayb qaadatay qiyaastii dadka 2012 inta u dhaxaysa November 14.000. In "Logitrans Transport Logistics Fair" oo la aqbalay sida waxqabadka ugu weyn ee suuqa saadka; Qeyb ka mid ah cocktail oo loogu talagalay martida iyo xubnaha saxaafadda ee Alishan Lojistik; Munaasabadda iyo saxeexa saxiixa shirkii ganacsiga ee Alishan - Interbulk ayaa la qabtay. Logitans Transport waa mid ka mid ah ururada ugu muhiimsan ee kulannada qaybaha saadka.
Alishan Logistics waxay la kulantay caalamka aduunka ee Logitans Transport Logistics Fair
News Archive Xulo bisha Oktoobar 2019 (219) Sebtembar 2019 (555) August 2019 (508) July 2019 (634) Juun 2019 (504) May 2019 (526) Abriil 2019 (418) Maarso 2019 (521) Febraayo 2019 (483) Janaayo 2019 (502) Range 2018 (620) Nofeembar 2018 (504) Oktoobar 2018 (435) Sebtembar 2018 (517) August 2018 (486) July 2018 (506) Juun 2018 (581) May 2018 (467) Abriil 2018 (545) Maarso 2018 (554) Febraayo 2018 (500) Janaayo 2018 (557) Range 2017 (509) Nofeembar 2017 (427) Oktoobar 2017 (538) Sebtembar 2017 (455) August 2017 (505) July 2017 (479) Juun 2017 (477) May 2017 (493) Abriil 2017 (434) Maarso 2017 (540) Febraayo 2017 (477) Janaayo 2017 (538) Range 2016 (487) Nofeembar 2016 (631) Oktoobar 2016 (657) Sebtembar 2016 (542) August 2016 (608) July 2016 (485) Juun 2016 (661) May 2016 (664) Abriil 2016 (700) Maarso 2016 (804) Febraayo 2016 (855) Janaayo 2016 (751) Range 2015 (799) Nofeembar 2015 (640) Oktoobar 2015 (624) Sebtembar 2015 (428) August 2015 (493) July 2015 (505) Juun 2015 (535) May 2015 (577) Abriil 2015 (622) Maarso 2015 (1017) Febraayo 2015 (878) Janaayo 2015 (1077) Range 2014 (963) Nofeembar 2014 (826) Oktoobar 2014 (771) Sebtembar 2014 (598) August 2014 (808) July 2014 (911) Juun 2014 (735) May 2014 (957) Abriil 2014 (972) Maarso 2014 (864) Febraayo 2014 (720) Janaayo 2014 (733) Range 2013 (664) Nofeembar 2013 (656) Oktoobar 2013 (548) Sebtembar 2013 (570) August 2013 (533) July 2013 (661) Juun 2013 (577) May 2013 (734) Abriil 2013 (1059) Maarso 2013 (1102) Febraayo 2013 (811) Janaayo 2013 (906) Range 2012 (911) Nofeembar 2012 (1168) Oktoobar 2012 (830) Sebtembar 2012 (886) August 2012 (974) July 2012 (863) Juun 2012 (591) May 2012 (445) Abriil 2012 (563) Maarso 2012 (699) Febraayo 2012 (546) Janaayo 2012 (417) Range 2011 (149) Nofeembar 2011 (35) Oktoobar 2011 (23) Sebtembar 2011 (18) August 2011 (25) July 2011 (18) Juun 2011 (16) May 2011 (13) Abriil 2011 (13) Maarso 2011 (33) Febraayo 2011 (24) Janaayo 2011 (13) Range 2010 (335) Nofeembar 2010 (12) Oktoobar 2010 (15) Sebtembar 2010 (12) August 2010 (16) July 2010 (9) Juun 2010 (19) May 2010 (6) Abriil 2010 (3) Maarso 2010 (62) Febraayo 2010 (303) Janaayo 2010 (1838) Range 2009 (4) Nofeembar 2009 (1) Oktoobar 2009 (3) Sebtembar 2009 (3) August 2009 (2) Juun 2009 (3) May 2009 (2) Abriil 2009 (3) Maarso 2009 (9) Febraayo 2009 (4) Janaayo 2009 (3) Nofeembar 2008 (1) Oktoobar 2008 (1) Sebtembar 2008 (2) August 2008 (1) July 2008 (2) Juun 2008 (2) May 2008 (2) Abriil 2008 (1) Maarso 2008 (3) Febraayo 2008 (5) Janaayo 2008 (2) Range 2007 (2) Oktoobar 2007 (2) July 2007 (1) May 2007 (1) Abriil 2007 (1) Febraayo 2007 (2) Janaayo 2007 (1) Range 2006 (1) Oktoobar 2006 (3) August 2006 (1) Juun 2006 (2) May 2006 (2) Abriil 2006 (2) Maarso 2006 (2) Nofeembar 2005 (2) August 2005 (1) Juun 2005 (1) Maarso 2005 (2) Febraayo 2005 (1) Janaayo 2005 (1) Range 2004 (1) Oktoobar 2004 (3) July 2004 (1) May 2004 (2) Range 2003 (1) Oktoobar 2003 (1) May 2003 (1) Maarso 2003 (1) Febraayo 2003 (1) Janaayo 2003 (1) Range 2002 (1) Oktoobar 2002 (4) August 2002 (1) Abriil 2002 (1) Maarso 2002 (2) Janaayo 2002 (2) July 2001 (1) Juun 2001 (1) Maarso 2001 (1) May 2000 (3) Maarso 1999 (1) Oktoobar 1998 (2) Maarso 1998 (1) August 1997 (1) Oktoobar 1996 (1) August 1996 (2) May 1995 (1) August 1992 (1) May 1990 (1)